आइपीएलः विराट भर्सेस रहाणे, कसको टिम बलियो? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः विराट भर्सेस रहाणे, कसको टिम बलियो?
काठमाडौं, चैत १९ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) मा (मंगलबार) राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर भिड्दै छन् । यी दुई टिमबीचको भिडन्त साँझ ८ः१५ बजेदेखि राजस्थानको घरेलु मैदान जयपुरमा हुँदैछ । जारी लिगमा दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा छन् ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः चेन्नईको पहिलो हार, मुम्बई ३७ रनले विजयी
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः पन्जावले टस जित्यो, मुम्बईलाई ब्याटिङको मौका